Jumlada Samsung S21 Ultra 3D Hot-laabayaasha TPU Shaashadda Difaaca Shaashadda | OTAO
TPU waa polyurethane thermoplastic ， Tani waa balaastikada kiimikada lagu xoojiyay oo hantideeda ay ka mid yihiin iska caabin xoqan, dabacsanaan, saliid iyo dufan iska caabin, iyo adkaansho kordhay. Maaddaama maaddadu ay laastiig tahay, waxay xadiday awoodaha "is-bogsashada". Tani waxay ka dhigan tahay in jilicsanaanteeda yar ay siineyso awood uu ku dhuuqo saameynta aan xad dhaafka aheyn, sida dhibcaha badankood iyo xoqid fudud, iyadoo la ilaalinayo dhamaan ama inta badan asalkeedii hore. Tusaale ahaan, xoqitaannada khafiifka ahi waxay inta badan ku reebaan waxoogaa yar oo ku duuban caagga jilicsan, oo si tartiib tartiib ah caadi ugu soo noqda.
Filimkii hore ee TPU waa mid aad u adag in la rakibo, xitaa ka dib tababar xirfadeed, waxaad la kulmi kartaa dhibaatooyinka noocaas ah: Xumbooyin hawadu way adag tahay in la xoqo, siigadana si fudud ayey u geli kartaa. Ka dib horumar joogto ah ka dib, filimka OTAO ee qaboobaha ah ayaa hadda lagu dhejin karaa waqti loogu talagalay dadka cusub ama hal mar. Kusoo dhawow si aad u daawato fiidiyowgeenna wixii faahfaahin ah.
Filimka OTAO ee TPU wuxuu ka sameysan yahay qalab laga soo dhoofiyo Kuuriyada Koofureed, adkeysigiisa dusha sarena wuxuu ka sarreeyaa kan filimka caadiga ah ee dabeecad xumada leh, kaas oo ka hortagi kara in shaashadda la xoqdo, iyo illaa iyo inta uusan aad u xoqin, wuxuu isku hagaajin karaa a saacado yar.
Tusaale u soo qaado Samsung S21 Ultra. Waqtigan xaadirka ah, inta badan filimaanta dabacsan ee suuqa kuyaala waxay lahaan doonaan mid ama kabadan dhibaatooyinka soosocda. Haddii adiga ama macaamiishaadu u dulqaadan karin dhibaatooyinkaas, TPU ayaa noqon doonta xulashada ugu fiican.
Aan si xasaasi ah ugu shaqeynin taabashada shaqada
Aqoonsiga sawirka faraha ma ahan mid xasaasi ah (inta badan Samsung S10, S20, S21, Xusuusin 10, Xusuusin 20 taxane ah ayaa isticmaalaya faraha faraha ultrasonic si loo furo)
Inta badan muraayadaha qaboojiyaha waxay isticmaali doonaan xuduudaha xarka xarka leh ee daabacan labada dhinacba, kuwaas oo guud ahaan ka ballaaran xuduudaha shaashadda taleefanka gacanta, taas oo hubaal xannibaysa qayb ka mid ah daaqadda bandhigga.
Saamaynta Halo ee shaashadda dhexe
Way adag tahay in lagu dhejiyo muraayada muraayada ah ee muraayada leh iyada oo aan wax xumbo ah lahayn
Si fudud u dhici
Way fududahay in siigo lagu helo ka dib isticmaal yar
Samsung Xusuusin 8
Samsung Xusuusin 9
Samsung Xusuusin 10
Samsung Xusuusin 10+
Samsung Xusuusin 20
Hore: IPhone 2.5D PMMA shaashadda ilaaliyaha Weligood jabin
Xiga: Samsung S21 Ultra UV xabagta qaboojiyaha
IPhone 2,5D shaashadda dhoobada dhoobada ah Marna ha ...
iPhone 12 taxane 3D cusbi laawaha muraayad s ...
iPhone 12 taxane Schott shaashadda muraayadda galaaska p ...